चाडबाडको खानपानमा विशेष ध्यान दिऔं
मीनु सिंह बुधवार, आश्विन २५, २०७४
काठमाडौं चाबहिलकी सरस्वती कार्की (२५) लाई मीठा परिकारका लागि चाडपर्व नै पर्खनुपर्छ । उनलाई मासुका परिकारले निकै लोभ्याउँछ, त्यसमा पनि खसीको मासु र माछा विशेष लाग्छ । बढी मसलादार र चिल्लो हुने भएकाले कुखुराको भन्दा खसीको मासु उनको रोजाइमा पर्छ । भान्सामा सधैं पाक्ने भन्दा चाडपर्वमा पाक्ने मासुको परिकार उनलाई बढी स्वादिष्ट लाग्छ । ‘अघिपछि भान्सामा मासु पाकेकै हुन्छ, तर चाडपर्वका परिकारको मासु नै बेग्लै लाग्छ ।’ भन्छिन्, ‘मासुबिनाको चाडपर्व कस्तो होला ?’
बानेश्वरकी चाँदनी मल्ल (३७) लाई मासुभन्दा अमिलो, पिरो र चिल्लो बढी मनपर्छ । उनलाई झोल हालेको भन्दा पनि पिरो र फ्राई गरिएको मासु स्वादिष्ट लाग्छ । भन्छिन्, ‘खानामा अमिलो पिरो भएन भने खाएजस्तै लाग्दैन ।’ गालेको अचारमा उनी लोभिन्छिन् । चाडपर्वमा सिजनअनुसार उनी अचार बनाउँछिन् । काँक्रोको अचार उनलाई विशेष लाग्छ । सुकेधाराका वीरबहादुर थापा (५८) का लागि हरेक साँझ मासु र मध्यपान अनिवार्य नै हुन्छ । सरकारी जागिरबाट अवकासप्राप्त उनलाई मीठो परिकार खान चाडपर्व नै कुर्नु भने पर्दैन । भन्छन्, ‘मेरो लागि सधैं दशैं ।’ उनका छोराबुहारी अमेरिका र छोरीज्वाईं नेपालगन्जमा जागिरे छन् । चाडपर्वमा उनीहरूले पठाएको रक्सीले वर्षभरि पिउन पुग्छ, थापालाई । भन्छन् , ‘भगवानको कृपाले अहिलेसम्म रक्सी किन्नु परेको छैन, पिउन पनि छोडिएको छैन ।’ खासै ठूलो रोग नलागे पनि कहिलेकाहीँ बेस्सरी टाउको दुख्ने र दमले भने सताउने गर्छ ।
मुटुका बिरामीले मासु खानै परे अस्ट्रिच, भेडा र कुखुराको खानु फाइदाजनक हुन्छ। यिनीहरूमा चिल्लो ज्यादै कम हुन्छ। डा. हरिहर खनाल, मुटुरोग विशेषज्ञ
कार्की, मल्ल र थापा त मासुका पारखी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । मासुका परिकार खान चाडबाड नै पर्खने नेपाली परम्परा बनेको छ । चिल्लो, पिरो र मसलेदार मासु खाने स्वादै जिब्रोको ठूलै जमात बनेको छ, अहिले । तर, त्यही खानाले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे भने धेरै अनभिज्ञ छन् । कति त जानाजान स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेछन् । यस कारण खानामा ध्यान नदिँदा चाडपर्व कतिपयको लागि दशा बनेर बिदा हुने गर्छ । जाँडरक्सी, तारेको, भुटेको मासु, अमिलो पिरो जस्ता अस्वस्थकर खानाले मानिसलाई पेट र मुटुमा सीधा असर पार्छ ।
जाँडरक्सी, मासु र अमिलो पिरोले मुटु, प्रेसर, दम र मधुमेहका बिरामीलाई अझ बढी असर गर्ने बताउँछन्, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. हरिहर खनाल । मुटुका बिरामीले चाडबाडमा खाइने खानपानमा ध्यान नदिए हृदयघात हुने डा.खनाल बताउँछन् । ‘चाडपर्वको समयमा बिरामीहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘हामी चिल्लो, पिरो, अमिलोबाट टाढै रहनुपर्छ । मुटु, प्रेसर, मधुमेहका बिरामीले मासु नखाएकै राम्रो ।’ मुटुका बिरामीले चिल्लो कम हुने अस्ट्रिच, भेडा र कुखुराको मासु खान उनको सुझाव छ । यस्तो मासुले बिरामी मात्र होइन, सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ  ।चिल्लोजन्य पदार्थ बढी खानेलाई मधुमेहको जोखिम हुन्छ । त्यस्ता बिरामीले सागसब्जी, दूध दही र कम कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानेकुरा बढी खान उनी सिफारिस गर्छन् । ‘डाइबिटिज, प्रेसर, सुगर भएका बिरामीले रातो मासु र तारेको खाने कुरा खानु हुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘बोसोयुक्त मासु, अमिलो पिरो अचार, जंक फुडजस्ता खाद्यवस्तु बाट टाढै बस्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि भण्डारण गरी राखेका तरकारी, फलफूल र मासु नै रोग निम्त्याउने कारक हुन्। यस्ता अखाद्य पदार्थबाट टाढै रहनुपर्छ। डा. निरज बम, फिजिसियन
भण्डारण खाद्य नखाऔँ
खानामा लापरबाहीकै कारण एकातिर बिरामीको संख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर अनावश्यक खर्चले दैनिकी धान्न गाह्रो छ । चाडपर्वको नाममा मसलेदार खाना खाने र रमाइलोको बहानामा जाँडरक्सी बढी खानेहरू नै अस्पताल पुग्ने गरेको फिजिसियन डा. निरज बम बताउँछन् । ‘मासुजन्य पदार्थ, चिल्लो अमिलोे खानाले पेटमा सीधै असर गर्छ । यस्ता खानाले पखाला, जन्डिस, भाइरल ज्वरो निम्त्याउँछ,’ डा. बमको सुझाव छ, ‘सुगर, प्रेसर, डाइबिटिज भएका बिरामीहरूले जाडरक्सी मुखमै हाल्नु हुँदैन ।’ खानामा हुने अमिलो पिरोले ग्यास्ट्रिक तथा रक्सीले कोलस्ट्रोल र मोटोपना बढाउँछ । ‘मोटोपना नै कैयौं रोगको संकेत हो,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा समयमा भण्डारण गरेको तरकारी, मासु र फलफूल रोग निम्त्याउने कारक हुन् । यस्ता अखाद्य पदार्थबाट टाढै रहनुपर्छ ।’
हरेक चाडपर्वको आफ्नै महत्व हुन्छ । लुगा किन्ने, मीठा परिकार खाने, नयाँं ठाउँं घुम्ने, आफन्तकहाँ टीका थाप्न जाने, दक्षिणा दिनेजस्ता हरेक कार्य आर्थिक पाटोसँग जोडिएर आउनेगर्छ । चाडपर्व आउनुअघि कुन–कुन शीर्षकमा कति र कसरी खर्च गर्ने भन्ने पूर्वयोजना बनाउनु बुद्धिमानी हुने ठान्छिन्, मनोविद् करुणा कुँवर । शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा तयार भएर मात्र चाडपर्व मनाउनाले थप आर्थिक भार थेग्नु नपर्ने र चाडपर्व बोझिलो नहुने उनी बताउँछिन् । चाडपर्वमा महिलालाई बढी बोझ हुन्छ ।
हरेक पक्षबाट तयार भएर चाडपर्व मनाउँदा न त थप आर्थिक भार थेग्नुपर्छ, न त चाडपर्व नै बोझिला लाग्छन्। करुणा कुँवर, मनोविद्
भान्साको जिम्मेवारी पनि महिलाकै हुने भएकाले भान्सामा धेरै समय बिताउनुपर्ने, पाहुनालाई खुवाउनुपर्ने, घरका सदस्यले खाए/नखाएको हेर्नुपर्ने हुँदा महिलालाई बोझिलो हुन्छ । जुन स्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक ठान्छिन्, कुँवर । समयमै खाना खान नपाउँदा उनीहरूमा पुरुषको तुलनामा ग्यास्ट्रिकको समस्या बढी देखापर्छ । चिल्लो, पिरो खाना र पानीको कमीका कारण कब्जियतले समेत सताउने गर्छ । यसबाट बच्न गृहिणीहरूले प्रशस्त पानी पिउनुपर्ने र हेभी खाना खाइसकेपछि त्यसलाई पचाउन खानामा सलाद, कागतीको मात्रा बढाउनुपर्ने कँुवरको सुझाव छ । अस्वस्थ खाना खाएर रोगी हुनुभन्दा स्वास्थ्यप्रति सचेत भई सन्तुलित आहारविहार शैली परिवर्तन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने चिकित्सक सुझाउँछन् ।